Sida loo geliyo gundhigga Faransiiska ereyga | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo dhigo guntinta Faransiiska ee Ereyga
Lola curiel | | General, Tricks, Tababarada
Sangria faransiiska waa nooc ka mid ah sangria meesha sadarka kowaad ee sadarka waxaa lagu hagaajiyaa barta bogga inta soo hartana wax yar ayaa bidix looga dhaqaaqaa. In kasta oo aysan ahayn wax aad u badan in loo isticmaalo nuxurka noocaas ah qoraallada, Haa, waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo tiro-koob iyo in lagu qoro buug-gacmeedka shaqooyinka tacliimeed heerarka APA. Mawduucan waxaan ku baran doonnaa sida loo geliyo faransiiska ereyga. Waxaan kuu sharxi doonaa sida loo sameeyo talaabo talaabo, iyadoo la tixgelinayo in habka loo qaabeeyo ay waxoogaa ku kala duwan tahay iyadoo ku xiran nidaamka hawlgalka kumbuyuutarkaaga.
1 Fur dukumiinti oo ku dhaji baaragaraaf si aad u tijaabiso
2 Sida loo dhigo Sangria Faransiis ah Mac
3 Sida loo dhigo galka Faransiiska ee Windows
4 Sida loo dejiyo gundhigga Faransiiska ee qaybta webka ee Word
Fur dukumiinti oo ku dhaji baaragaraaf si aad u tijaabiso
Aynu baarno. Tag Ereyga oo ku dheji sadar qoraal ah. Marka xigta, waa inaad doorataa sadarka oo dhan. Tallaabooyinka aan raaci doonno tan xigta waxay ku xirnaan doonaan haddii nidaamkaaga qalliinka uu yahay Windows ama Mac iyo haddii aad ka shaqeyso Word Online ama nooca desktop-ka.
Sida loo dhigo Sangria Faransiis ah Mac
Iyada oo sadarka la xushay, tag baarka sare oo guji "qaab" tab. Liistada hoos ku qoran, waa inaad doorataa "sadarka".
Daaqad si toos ah ayuu u furi doonaa Qaybta "indentation", ka raadi "khaas" oo xulo ikhtiyaarka "galka Faransiiska". ka fogaanta tuducyada indented marka loo eego dhinaca margin waa wax laga beddeli karaa haddii aad beddesho qiimayaasha ku habboon "on:". Shaashadda hoose, waxaad ku eegaan kartaa isbeddelada. Markaad ku qanacdo natiijada, riix "in la aqbalo".
Sida loo dhigo galka Faransiiska ee Windows
Hubso inaad xulatay sadarka la doonayo. Kadib, Tag tabka "guriga" ee ku yaal liiska kore oo raadi qaybta "baaragaraafka". Waxaad riixi doontaa eAstaanta lagu muujiyey sawirka kore iyo dariishad ay kujiraan xulashooyinka iyo kala-fogaanshaha ayaa si toos ah u furi doona.
Daaqadda gudaheeda, Raadi qaybta "sangria" iyo "gaar ah" waxaad dooran doontaa "fanka sangria". Midigta agteeda, hoosta "gudaha:" waxaad hagaajin kartaa qoto dheerida galka. Eeg sanduuqa ka muuqda xagga hoose ee daaqadda, waa hordhaca, marka aad ku faraxsan tahay natiijada, dhagsii "aqbal".
Sida loo dejiyo gundhigga Faransiiska ee qaybta webka ee Word
Ku dhejinta gundhigga Faransiiska ee qaybta webka ee Word waa mid aad u fudud, aadna ugu eg sida loogu sameeyo nooca desktop-ka ee Windows. Markaad doorato cutubka, tag tabta "guriga" iyo qaybta "sadarka" waa inaad gujisaa calaamadda u muuqata muujinta sawirka kore. Daaqad ayaa furi doonta. Gudaha qaybta "Sangria" waa inaad aadaa "khaas" oo aad doorataa "Sangria faransiiska". Hoosta, hoosta "in:" waxaad ku qeexi kartaa qoto dheer galka.
Mid ka mid ah wax la soo dhaafay, waxaa laga yaabaa in menu sare waa la yareeyay (mararka qaarkood waxay u muuqataa sidan tan oo kale). Hadday taasi tahay kiiskaaga, waxaad haysataa laba ikhtiyaar:
Waxaad awoodi kartaa weyso menu haciendo dhagsii calaamadda tilmaanta fallaadh sawirka kore.
Sidoo kale waad riixi kartaa 3da dhibic (fiiri shaashadda, way hareeraysan yihiin). Liiska hoos-u-dhaca ayaa furi doona, waa inaad gujisaa "Xulashada baaragaraafka" daaqaduna way soo muuqan doontaa iyada oo la raacayo ikhtiyaaraadka iyo kala fogaanshaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo dhigo guntinta Faransiiska ee Ereyga
Sida loo sameeyo boorarka
Kaararka ganacsiga asalka ah